LinuxCapable - Akụkọ Linux enyi na enyi, otuto na nkuzi
Wụnye Linux Kernel 5.16/5.17 na Fedora 34/35
Linux kernel 5.16 nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, nkwado na nchekwa. Mwepụta kernel Linux 5.16 nwere nnukwu atụmatụ ọhụrụ, FUTEX2, ma ọ bụ futex_watv(), nke chọrọ imeziwanye ahụmịhe egwuregwu Linux, na-eto nke ọma na ọdụ ụgbọ mmiri Linux ka mma maka egwuregwu Windows na-eji mmanya. Nkwalite ndị ọzọ ahụla ka onye nhazi ọrụ njikwa mkpakọ ka emelitere maka…
Categories Fedora Tags Fedora 34, Fedora 35, Linux kernel
Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA 510.39.01 na Fedora 34/35
Ọtụtụ sistemụ desktọpụ Linux ọgbara ọhụrụ dị ka Fedora na-abịa na onye ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA etinyere ya na onye ọkwọ ụgbọ ala mepere emepe Nouveau maka kaadị vidiyo NVIDIA. Maka ọtụtụ akụkụ, nke a bụ ihe a na-anabata; Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ Linux gị maka imepụta eserese ma ọ bụ egwuregwu, ị nwere ike nweta ndị ọkwọ ụgbọ ala ka mma. N'akụkọ ihe mere eme, ndị ọkwọ ụgbọ ala Nouveau dị nwayọ karịa Nvidia…
Categories Fedora Tags Fedora 34, Fedora 35, Nvidia
Wenezdee, Jenụwarị 26, 2022 by Jọshụa James
Brave bụ ihe nchọgharị weebụ efu na mepere emepe nke Brave Software, Inc. mepụtara dabere na ihe nchọgharị weebụ Chromium. Brave bụ ihe nchọgharị ịntanetị lekwasịrị anya na nzuzo nke na-ekewapụta onwe ya na ihe nchọgharị ndị ọzọ site na igbochi mgbasa ozi ịntanetị na ndị na-achọpụta weebụsaịtị na ntọala ndabara ya ozugbo. Brave kwuru na ihe nchọgharị ya na-etinye obere nsogbu…
Categories os nke osiri Tags Nchọgharị Obi Ike, OS 6 nke mbu
Wụnye LAMP Stack na Rocky Linux 8.3/8.4
Wenezdee, Jenụwarị 26, 2022 Tuesday, January 25, 2022 by Jọshụa James
Categories Nkume linux Tags LAMP, Nkume Linux 8
Wụnye Asụsụ Mmemme R na Linux Mint 20.0/20.1/20.2/20.3
R bụ asụsụ mmemme mepere emepe yana gburugburu sọftụwia efu maka mgbakọ mgbakọ na mwepụ na ihe ngosi eserese nke R Core Team na R Foundation mepụtara ma kwado ya. A na-eji ewu ewu R n'ọtụtụ ebe n'etiti ndị na-agụkọ ọnụ ọgụgụ na ndị na-egwupụta data maka ndị nrụpụta ngwanrọ na nyocha data. N'ime nkuzi a, ị ga-…
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Asụsụ Mmemme
Wụnye Discord na elementrị OS 6.0/6.1
Tuesday, January 25, 2022 Saturday, January 22, 2022 by Jọshụa James
Discord bụ ngwa mkparịta ụka olu, vidiyo na ederede efu nke ọtụtụ iri nde mmadụ ndị gbara afọ 13+ na-eji na-akpakọrịta na ndị obodo na ndị enyi ha. Ndị ọrụ na-eji oku olu, oku vidiyo, ozi ederede, mgbasa ozi, na faịlụ na nkata nzuzo ma ọ bụ akụkụ nke obodo akpọrọ "sava." …
Categories os nke osiri Tags Nsogbu, OS 6 nke mbu
Page1 Page2 ... Page50 Osote →